Dilka Xubin ka Tirsan Golaha Dhexe ee Kooxda Jwxo-shiil, oo aan Wali la Xaqiijin – Rasaasa News
Dilka Xubin ka Tirsan Golaha Dhexe ee Kooxda Jwxo-shiil, oo aan Wali la Xaqiijin
Sep 6, 2011 Dilka Xubin ka Tirsan Golaha Dhexe ee Kooxda Jwxo-shiil, oo aan Wali la Xaqiijin
Nairobi, Sep 5, 2011 [ras] – Xubin lagu magacaabo Cabdi Kaafi, oo ka tirsanaan jiray kooxda Jwxo-shiil, oo hore loo sheegay in habeenkii xalay ahaa dabley aan la garanaynin ay ku dileen magaalada Nairobi ee dalka Kenya, ayaan wali la xaqiijin dhimasho balse aan meel lagu ogayn tan iyo shalay.
Cabdi Kaafi, oo ka mid ahaa xubnaha aan aadka loo aqoon mudo hore ku biiray golaha dhexe ee ONLF, inta uusan Jwxo-shiil jabinin ururka, ayaa waxaa uu ka mid ahaa xubnaha uga hawlgala kooxda dalka Kenya. Degaan ahaana Cabdi Kaafi waxaa uu ka soo jeedaa, tuulada Garigo,an.
Wali ma cada waxa uu ku sugan yahay Kafi dhimasho iyo nolol, waxaana loo badinayaa dhimasho maydse la helin. Waxaa la ogyahay in dalka Kenya ay ka socdaan dilal is daba joog ah, oo loo gaysanayey dadka ka soo jeeda gabalka Ogaden, inta badana ku dhacay kooxda Jwxo-shiil.
19 bishii tagtay ee August, ayay ahayd markii Cabdirisaaq Tiibaa oo hore uga tirsanaan jiray kooxda Jwxo-shiil, lagu dilay xerada Qaxootiga ee IFO, dilkaas oo la sheegay in uu ka dambeeyey Maxamed Shariif oo golaha dhexe kooxda ah, ka dib kolkii ay isku af dhaafeen lacag xawaalad ah.
Dilalka is daba jooga ah oo inta badan lagu eedeeyo in ay ka dambeeyaan xubnaha kooxda Jwxo-shiil, uga hawl gala dalka Kenya ayeyna jirin ruux qudha oo lagu soo eedeeyey dilalka qarsoon ee faraha badan.
Todobaadkii hore ayaa lagu qabtay magaalada Garrissa todoba xubnood , oo ka tirsan kooxda Jwxo-shiil, oo loo haysto in ay ka dambeeyaan dilalka is daba jooga ah ee ka dhacaya dalka Kenya. Waxaa isweydiin leh dilalka kooxda ku dhacay kuma jiraan xigtada Jwxo-shiil, waxaana la rumaysan yahay in uu isagu bixiyo amarada lagu dilo xubnaha.
Kooxda Jwxo-shiil, oo si toos ah ugu shaqeeya xukuumada Eritrea, ayaa waxay dabeecad ka dhigatay dilalka qarsoon ee ay u gaysto xubnaheeda, kolka wax la isku qabto. Waxaana ay xubno kooxda ka tirsan noo sheegeen in xubnaha intooda badan ay ku shaqeeyaan Cabsi ah in xubno qoyskiisa ah la dili ama naftooda, hadii ay sameeyaan wax khilaafsan waxa loo sheego.
Kooxdan ayaa dhibaatooyin xoog leh oo isugu jira dilal, dhac iyo kufsi hore uga soo gaystay gabalka Ogaden ee Somalida. Waxaana xoog kaga saaray gabalka Ogaden ciidamo cusub oo uu yeeshay gabalka Ogaden oo intooda badan ay yihiin dad hore xubno uga ahaa ururkii ONLF.
Dalka Kenya ayaa ahaa dalka ay ugu badan yihiin kooxda Jwxo-shiil, haday noqoto dadka taageera iyo hadii ay noqoto xubnaha golaha dhexe.
Tan iyo bishii February ee sanadkan waxay kooxdu iska dishay marka laga tago xubnaha kale, afar  xubnood oo golaha dhexe ah. Waxaa ka baxsaday kooxda hal xubin oo galay dalka Malaysia, waxaa jooga dalka Kenya saddex xubnood oo gole dhex ah oo mid uu ganacsade yahay.
Dadkan dhimanaya maalin walba waa dad ka dhimanaya gabalka Ogaden oo aan dib u soo noqonaynin. Marka ay dhacdo dhibaato noocaas oo kale ahna waxaa wanaagsan in caqligu shaqeeyo lana joojisyo dhimashada micna darada ah.
Dhibaatadan joogtada ah waxaa masuul ka ah Jwxo-shiil, lagamana yaabo in ay xabadi disho ee waxaa uu ku dhiman doonaa sariir korkeed, sidaas daraadeed cid kasta oo aaminsan isaga ha garwaaqsato in uu Jwxo-shiil, jabiyey halgankii xaqa ahaa iyo Ogadeenba.
Jwxo-shiil, oo Istiraatiijiyad iyo Amara cusub oo Ismiidaamin ah Soo Saaray